Tena mi-“flotte” tokoa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Isan’ny olona be mpihaino raha i Ravalomanana. Na ilay filoham-pirenena teo aloha izany na ny jeneraly zandary amperinasa. Ity farany moa dia nomen’ny mpanatsatso anaram-bositra nifanaraka tamin’ireny fipoahan’ny baomba matetika ireny, fipoahana nandritra ny Tetezamita.
Isan’ny tena be mpanaraka ity jeneraly ity raha vao manokatra vava. Mainka raha izy mitafa amin’ny mpampita vaovao izany. Izy rahateo efa nilaza fa nianatra manokana momba ny serasera. Tsapa tokoa fa tia mifanerasera amin’ireo mpampita vaovao ny tenany.
Vao lany ny filoham-pirenena vaovao dia namory ireo mpanao gazety ny tenany miaraka amin’ireo lehiben’ny filaminam-bahoaka mahefa sy amperinasa. “Mi-flotte izahay mpitandro ny filaminana” izay no isan’ny notsoahin’ny olon-tsotra taorian’ny fampitam-baovao teny amin’ny gazety sy haino aman-jery rehetra. Saika nitatitra izay resaka izay tokoa ry zareo ireo. Nahoraka io teny io. Nanazava ireo manam-boninahitra ireo fa tsy mbola nandray azy ireo ny filoham-pirenena vaovao hatramin’ny nanaovany ny fianianany. Fanambarana toa fitarainana.
Nahoraka ilay feo. Tsy latsaka antsofon’ny marenina akory ilay teny. Nibitaka ny sasany tany ho any. Inona hoy ianao no nitranga ?
Nitehaka ireo tsy mataho-tody. Mpanarao-pahalemana. Raikitra ny fanafihana trano fivarotana tetsy sy teroa. Nitombo isa angaha no marimarina kokoa satria nisy foana izany. Isan’ny nalaza ilay fanafihana banky, Accès Banque, ao Andavamamba. Andro vao maraina, andro misandratra, raha vao nanokatra ny toeram-piasana ity banky ity. Kartie be olona. Tsy nahasakana ireo mpanao asa ratsy izany. Mi-flotte ianareo ? Tsy nisy izany fanambarana izany azy nanao ny nataony ireo jiolahy. Manararaotra toy ny banga mihomehy alina ny sasany. Fony mbola nisy aza ny mpibaiko hentitra nanao izy nataon’ny jiolahy sy jiovavy mainka fa olona manambara ho ren-danitra ho ren-danitra fa miraviravy tanana !
Mi-flotte ireo mahay misambotra. Ireny fa mi-flotte eny andrano (ranomamy sy ranomasina) ireo andramena na boaderôzy no tena ao ambavan’ny rehetra. Ny mpanenjika no mi-flotte fa ireo henjehina kosa mahay milomano. Indreny fa misy tratra. Tampoka. Voalaza ao fa akaiky ny mpitondra ankehitriny ireo tratra ireo. Mpamatsy vola nandritra ny fampielezan-kevitra teo iny hono. Ity honohono ity kosa aloha dia ‘mampy’ “flotte” mampiroaroa saina tokoa. Voalaza koa fa mpiambina olona ambony teo amin’ny fitondrana nandritra ny Tetezamita ilay nanafika ny Accès Banque ary karohin’ireo mi-“flotte”.
Mi-“flotte” izany dia mitsingevaheva no azo handikana azy. Raha mitsingevaheva ireo mpitandro ny filaminana dia hita fa mitsingevaheva ihany koa ireo depiote vao voafidy teo. Efa 26 izao ireo tsy miankina no nifidianana azy teny ifotony ary izao efa miankin-doha mba ho azo antoka ny fanatanterahana ny fanamby natao tamin’ireo taranaka amam-para eny amin’ny fari-pifidianana. Tsy miankina izy ireo ary izao nifamatotra mba hitambatra ho antoko iray. Voalaza fa efa nifamatotra amin’ny antoko Mapar ny tsirairay tamin’ireo nanangana ny GPS. Nilokaloka ry zareo fa hitondra fanovana eo amin’ny fanaovana politika kinanjo ni-flotte sahady ilay lokaloka natao mba hahazoana ny fo sy ny vato fa ny fanao teo aloha sahady no miverina.
“Dia gaga ianao” manoloana ny zava-misy. Diso izay milaza fa gaga manoloana ny zava-misy. Vokatry ny fanoroana lalana ratsy nanomboka teo amin’ny 2009 no tena nisongadina io fanoroana lalana ratsy io. Miaramila tsotra nandray vozona akanjo manamboninahitra ? Nahazo tehaka. Efa tany no ni-“flotte” ny fibaikoana. Tokony ho nisy ny fanasaziana taty aoriana. Tsy re izany. Kolonely lasa miliaridera ? Zava-misy izany ary tsy mitarika fanadihadiana (maromaro ireo kolonely lasa miliaridera ireo fa tsy iray na roa akory). 2009 dia tahaka ny talata gorobaka ka vaky sambo ny firenena.
Santionany ihany izany tanisaina izany. Volamena naondrana antsokosoko, sokatra any ivelany vao tratra… Marina tokoa ny an’ilay jeneraly raha nilaza izy fa mi-flotte ry zareo.Mila manam-boninahitra sahy mampiseho fa manam-panahy sy tsy mitsingevaheva izany ny fanarenana ny firenena. Tsy miankina amin’ny baiko fotsiny izany. Izao no ilaina ilay antsoina hoe “ baïonnettes intelligentes”. Mahereza.